Qoysas Ka Soo Barakacay Shabeellaha Hoose Ayaa Soo Gaaray Kaxda, Muqdisho – Goobjoog News
Qoysas Ka Soo Barakacay Shabeellaha Hoose Ayaa Soo Gaaray Kaxda, Muqdisho
Qoysas hor leh oo ka soo barakacay deegaanno ka mid ah gobolka shabeellada hoose oo dhawaan ay duqeymo ka dhaceen ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho.
Dadkani ayaan xilligan heysan hooy ay ka galaan roobka iyo qoraxda sida uu xaqiijiyey maamulka degmada Kaxda, qoysaskan waxaa ay ka kala yimaadeen degaannada Basra, Bariire iyo meelo kale oo ay dagaallo ka dhaceen.
Qaar ka mida dadkani ayaa Goobjoog News u sheegay in xiligani ay heystaan xaalado bani’aadanimo waxaa ayna dalbanayaan gargaar degdeg ah.
“Waxaan lahaa geel iyo Lo’ waay baaba’een, beer aan beeranno ma jirto, waan baahanahay meeshaas ayaan ka soo baro kacay “.Waxaan ka soo baro kacnay tooratoorow oo dhibaato naga soo barakicisay, waxaa na keenay dhib, Lo’ waan heesannay waa ay naga dhamaatay”. Mid ka mid ah dadka la hadlay Goobjoog News oo magaciisa aan sheegin.
Guddoomiyahay waaxda saddexaad ee Kaxda Zakariye Cabdullahi oo isaga ku sugnaa xerooyinka cusub oo dadkani la dejinaayey ayaa sheegay in labadii maalin ee la soo dhaafay ay soo gaareen in ka badan 1000 qof degmada kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho.
“Waaxda saddexaad ee Cumar Fiyaasko waxaa soo gaaray todobaadkaan gudahiisa dad aad iyo aad u tiro badan oo ka soo guuray Basro iyo Bariire”.
Duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku nool qoysas aad u badan kuwaas oo horay uga soo baro kacay abaaraha ku dhuftay qaar ka mida gobollada dalka,waxaan barakacyaashaan cusub iyo kuwii horay u deganaa ay hadda la kulmayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah.
Qaraxyo ismiidaamin ah oo Galabta ka dhacay Baydhabo, Koofur Galbeed Soomaaliya(Dhageyso)
Dowladda Kenya oo Hawlgal Ciidan Ku Qaaday Keyn Lagu Tuhmayo Alshabaab
Qbugsv oyysmz buy generic cialis how to get cialis
Jrksep lfrxjr Cialis mail order usa cialis coupon
Dkwsbw wwgizu cheap generic viagra online goodrx cialis
Tmvofp hehuhg Cialis on sale pharmacy online
18 Qof Oo Ku Geeriyootay Iska Hor imaad Ka Dhacay Niger
how to spot fake viagra pills https://bogazicitente.com/3es4...
how can i buy real viagra online viagra 100mg viagra trial c...
grosir ayam potong jogja